म कसरी विवरणको अमेरिकी नागरिक बन्न सक्छु? 🇺🇸 - Ne gerekir?
म कसरी विवरणमा अमेरिकी नागरिक बन्न सक्छु? 🇺🇸
म कसरी एक अमेरिकी नागरिक बन्न सक्छु?
अमेरिका जुन आप्रवासीहरूको देश हो, यसले आफ्नो इतिहासमा विश्वका अरू भन्दा कता हो कता राम्रो अवसर प्रदान गरेको छ। त्यसकारण उनीहरू ठूला अमेरिकी नागरिकताको सपना देख्छन्।
अमेरिकी नागरिक हुनुका फाइदाहरू
एक देश जुन बाँचिरहेको छ र सबै मतभेद होस्ट गर्दछ
धनी, विविध आर्थिक अवसरहरू
धेरै देशहरूमा भिसा-मुक्त प्रविष्टि
धेरै बलियो पासपोर्ट छ
दोहोरो नागरिकताको स्वीकृति
जीवनको उच्च गुणवत्ता
अंग्रेजी भाषाको प्रयोग मुख्य भाषाको रूपमा विश्वभर फैलियो
स्वतन्त्र महसुस गर्दै
तपाईको व्यक्तिगत ठाउँको कहिले पनि उल्ल .्घन हुँदैन
उच्च स्तरको सम्मान पाएको
तपाईको कसैको आँखा छैन
तपाईलाई के गर्नुहुन्छ वा तपाइँ कसरी लुगा गर्नुहुन्छ भनेर कसैलाई पनि मतलब छैन
तपाईको कामको बखत तपाईको पेशालाई नबुझीकन उच्च स्तरको जीवन यापन गर्दै
तपाइँ चाहानुहुन्छ छोटो समयमा मानक कार प्राप्त गर्दै
तपाईले चाहानु भएको जस्तो एक्लो बस्न सक्षम हुनु
सबै क्रमबद्ध र प्रणालीमा जडान भयो
सुन्दर वातावरण, सडक, साइनेज लेआउटहरू
यातायात मा दूरी बनाए
जताततै सफा र मर्मत गर्दै
नागरिकता प्राप्त गर्न कठिनाइ र भविष्यको पश्चाताप
नागरिकता प्राप्त गर्ने ठूलो कारण भएका अमेरिकालाई पनि धेरै पछुतो हुन सक्छ। हामी यो सोच्छौं कि स्वतन्त्रताको देश हुनुको मतलब यो होइन कि यसले सबै चीजलाई अनुमति दिनेछ र केही समय पछि डोरीको अन्त्य भयो।
यात्राको लागि कडा आवश्यक्ता भिसाको अतिरिक्त, के यो पनि नागरिकता प्राप्त गर्ने हो? के हामी सबै संसारका नागरिकहरू होइनौं? मानिसहरूलाई यत्ति धेरै जबरजस्ती गर्नको लागि के हो? म भन्छु, यो दिनको लागि हास्यास्पद हुनेछ।
पहिले अमेरिकी नागरिकता पाउन सजिलो थिएन, अब यो सजिलो छैन। व्यवस्थापन परिप्रेक्ष्य, जुन अध्यागमन धेरै मनपर्दैन, तिनीहरूको नयाँ कार्यान्वयनको साथ आँखा डराउँदछ।
यदि तपाइँले भन्नुभएको छ भने त्यहाँ कुनै आशा छैन, होईन। धेरै व्यक्तिले अझै पनि अमेरिकी नागरिकता पाउन सक्छन्।
२०१० मा, संयुक्त राज्य अमेरिकाले विदेशमा आफ्ना नागरिकहरूको सम्पत्तिहरू नियन्त्रणमा राख्यो, जस्तै कार, घर र उनीहरूको बैंकमा पैसा, र FATCA, विदेशी खाता कर अनुपालन ऐन, कर लागू गर्न।
यसले स्वीजरल्याण्ड, इ England्ल्याण्ड, फ्रान्स र अन्य countries० देशहरूमा application 70 हजार बैंकहरूमा यो अनुप्रयोग लागू गरेको छ।
बैंकहरूले अमेरिकी नागरिकको कोष र बैंकमा अन्य sec०,००० डलरको अन्य धितोहरूको अमेरिकी सरकारलाई सूचित गर्न थाल्नेछ। यसैले संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस कानूनबाट १० बर्ष भित्र करिब $ 50. million मिलियन कर राजस्व प्राप्त गर्नेछ।
यद्यपि यो कानूनले मानिसहरूलाई अमेरिकी नागरिकता गुमायो। पछिल्ला years बर्षमा करीव ,9०,००० मानिसहरूले अमेरिकी नागरिकता गुमाएका छन्, जसमा अमेरिकामा जन्मिएका, प्रख्यात र अपूर्व नामहरू समावेश छन्।
यसको अतिरिक्त, अमेरिकी प्रशासनहरू, जुन जन्म पर्यटनको विरुद्धमा पनि छ, संयुक्त राज्य अमेरिकामा जन्म दिन अवसरहरू गाह्रो भएको छ।
FATCA पछि मातृत्व पर्यटन पहिलेको जस्तो प्राथमिकता पाइँदैन, भविष्यमा पनि मेरो बच्चाको व्यवसायलाई फाइदा पुर्‍याउन प्रसूति पर्यटनमा भाग लिने व्यक्तिहरु पनि अब आफ्नो नागरिकता त्याग्न प्रयास गरिरहेका छन।
वाशिंगटनको राजधानीले घोषणा गर्‍यो, जनवरी २ 24, २०२० बाट सबै देशका गर्भवती महिलाहरूले अस्थायी भिसा लिन अस्वीकार गर्नेछन्।
तिनीहरूले यी निर्णयहरू उनीहरूको इमिग्रेशनलाई मन नपराउने, दुर्व्यवहार गर्ने र उनीहरूको मुलुकमा भागेका मानिसहरू तिर्ने जस्ता कारणका लागि गर्छन्, यद्यपि यसले उनीहरूको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण फर्काउँछ।
अमेरिकामा दिएको अधिकार फिर्ता लिन सकिदैन, नागरिकता जस्ता। तर प्रशासनले भन्यो, "हामी सबै बच्चाहरूको नागरिकता रद्द गरौं जसले इमिग्रेशनको रूपमा जन्म टुरिज्मको साथ जन्म दिए।" आफ्नो राय रक्षा गर्दछ। त्यस्तो निर्णय हालमा गरिएको छैन, तर यो व्यवस्थापनको दृष्टिकोण हो। जहाँसम्म हामीले अनुसन्धान गरिसकेका छौं, तपाईको मूल्या be्कन गर्न सकिन्छ र केही कागजातमा हस्ताक्षर गरेपछि स्थिति परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर अस्पताल र अन्य खर्चहरू भुक्तान हुनेछ भन्दै। अर्को शब्दमा, अमेरिकी नागरिकतामा प्रतिबन्धहरू अझ गम्भीर हुने सम्भावना छ।
स्वास्थ्य सेवा लागत
स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्च खर्च, थोरै स्वास्थ्य जाँचको लागि पनि ज्याला बढी वेतन।
उदाहरण को लागी, यदि कार्यस्थलले तपाईको स्वास्थ्य बीमाको %०% भुक्तान गर्दछ भने पनि तपाईले प्रत्येक महिना औसतन १००१२० तिर्नु पर्छ। त्यसो गर्न असफल भएमा तपाइँको कर फिर्ताको लागि फाइल गर्ने पेनल्टको परिणाम हुनेछ।
नागरिक बने पछि फार्महरू जारी छन्
अमेरिकी नागरिक बने पछि पनि चीजहरूको अन्त्य हुँदैन, धेरै चरणहरू र फारमहरू पछि जुन अमेरिकाको नागरिक बन्न पूरा गर्नुपर्दछ। यो भनिन्छ कि निरन्तर घोषणा रिपोर्टिंग को घटना समाप्त भएको छैन।
थोरै स्वास्थ्य जाँचमा पनि, कम्तिमा २ पृष्ठका २ फारामहरू भरिए। यसले वास्तवमा केही समय पछि व्यक्तिलाई चोट पुर्‍याउन सक्छ।
विदेशमा बस्नुको सबैभन्दा गाह्रो कुरा भनेको तपाईं आफ्नो परिवार र वरपरबाट टाढा हुनुहुन्छ।
टर्की खानाबाट वञ्चित हुनु
यदि तपाईं टर्की खाना पकाउन चाहानुहुन्छ भने त्यहाँ सामग्रीको कुनै अभाव हुनेछैन, तर टर्कीको हावा, पानी र माटोबाट सामग्री फेला पार्न सक्षम हुनु नै सबैभन्दा ठूलो नोक्सान हुनेछ 🙂
अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न ne gerekir?
ग्रीन कार्डका लागि आवेदन गर्दै, कमाई गर्दै
स्थायी निवास स्थिति
अमेरिकामा शारीरिक उपस्थिति
स्थानीय निवास आवश्यकता
राम्रो, नैतिक चरित्र छ
अमेरिकी संविधानका आदर्श र सिद्धान्तहरूको पालना गर्दै
संयुक्त राज्य अमेरिका गर्न को लागी वफादार रहन
अमेरिकी नागरिकताको लागि आवश्यकताहरू
तपाईंको ग्रीन कार्ड जारी भएपछि, तपाईंले कम्तिमा लगातार5वर्षसम्म स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) को स्थिति कायम गर्नुपर्छ। थप रूपमा, तपाईंले तपाईंको स्थायी निवास अनुमति र कानूनी यात्रा आदेश पंजीकरण जस्ता सबै जिम्मेवारी सबै कानुनी आवश्यकताहरू पूरा गरेको हुनुपर्दछ।
नागरिकताका लागि N-400 फारममा आवेदन मिति भन्दा पहिले prior बर्ष अमेरिकामा भएको प्रमाणित गर्नु पर्छ।
हरियो कार्डका लागि आवेदन दिनुहोस्
जब तपाईं गुगलमा खोजी गर्नुहुन्छ, तपाईंले अन्य साइटहरू सामना गर्न सक्नुहुनेछ जुन विज्ञापनको साथ पहिलो स्थानमा छ। यस बाहेक, यी साइटहरू जुन धेरै औपचारिक र व्यावसायिक देखिन्छन्। तर धोका नदिनुहोस् र यो लिंक, जुन आधिकारिक ठेगाना हो यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
नि: शुल्क DV-2022 ग्रीन कार्डको लागि कसरी आवेदन दिने?
अमेरिका भिसा / ग्रीन कार्ड राहदानी फोटो घरमा कसरी लिने?
पछि, तपाईंले ग्रीन कार्ड तपाईंमा देखा पर्खनु पर्नेछ।
अन्तर्वार्तामा, तिनीहरूले तपाईं को लागी करीव १ घण्टा उनीहरूलाई प्रमाणित गर्न प्रश्न गर्नेछन्। यो शान्त रहन र सत्य बताउन उपयोगी छ। तिनीहरूले बुझ्नेछन्। (नमूनाहरू उपलब्ध छन्)
तपाई अमेरिकामा कम से कम months० महिनाको लागि शारीरिक रुपमा हुनुभएको हुनुपर्दछ, within बर्ष भित्र तपाईले N-400 फाराम पूरा गर्नु भन्दा पहिले।
स्थानीय निवास निवास राज्य को राज्य र यसको सम्बद्ध नागरिकता र आप्रवास कार्यालय (USCIS) क्षेत्र मा हुनु पर्छ। तपाईं कम्तिमा state महिनाको लागि त्यो राज्यमा बस्नुभएको हुनुपर्दछ।
तपाईंसँग आधारभूत स्तरमा अ speak्ग्रेजी बोल्न, पढ्न र लेख्न सक्ने क्षमता हुनुपर्दछ।
प्रक्रियाको अन्त्यमा, तपाईंको भाषाको स्तर प्राकृतिकीकरण परीक्षाको साथ मापन गरिनेछ। अ English्ग्रेजी साक्षात्कारमा बोलेको हुनाले, तपाईंको अंग्रेजी कस्तो प्रकारको छ भन्ने कुरा बुझ्नेछ।
यो वाक्य पढ्ने र वाक्य लेख्ने रूप लिन सक्दछ। यी आधारभूत सुविधा को भनिन्छ।
तपाईंसँग लेखन र पढ्ने तीन अधिकार छन्, तीन मध्ये एक सहि सही हुनै पर्छ। पहिले नै तपाईंको नागरिकता ज्ञान मापन गर्न तपाईंलाई परीक्षा पुस्तिका दिइनेछ। कुन शब्दहरू सोध्नु पुस्तिकाको पछाडि छ।
अमेरिकी इतिहास र राज्यको आधारभूत ज्ञान आवश्यक छ।
अमेरिकी नागरिकता र आप्रवासन कार्यालय (युएससीआईएस) द्वारा तयार गरिएको मार्गदर्शन कागजातहरूले तपाईंलाई धेरै मद्दत गर्दछ।
दिईएको पुस्तिकामा १०० मध्ये questions वटा प्रश्नहरूको पनि राम्ररी जान्न तपाईंलाई मद्दत गर्दछ। यस पुस्तिकामा तपाईले अमेरिकी राष्ट्रपतिको नाम, अमेरिकी इतिहासका प्रश्नहरू र भूगोल प्रश्नहरू जस्ता विषयहरू भेट्नुहुनेछ। तपाईले धेरै कुरा सिक्नु भएको छ अमेरिकामा रहँदा years बर्षसम्म जे भए पनि।
सामान्यतया, तपाइँ तपाइँको स्थायी निवास स्थिति को आवश्यकताहरु को पूरा र अमेरिकी कानून को पालना गर्न पर्छ।
उच्च सामाजिक सुरक्षा नम्बर भएको, तपाईंको तलब, तपाईंको पेशा र तपाईंको कर भुक्तानी स्थितिमा पनि प्रभाव पार्दछ।
यो पाठ्यक्रम नै उनीहरूको सबैभन्दा बढी ख्याल गर्ने पोइन्टहरू हुन्। तपाईंसँग सफ्ट रेकर्ड हुनुपर्दछ र अमेरिकाको आदर्श र सिद्धान्तहरू पालना गर्नुहोस्।
संयुक्त राज्य अमेरिका को संविधान को लागी क्लिक गर्नुहोस्।
के हुन्छ यदि म अन्तर्वार्ता / अन्तर्वार्ताबाट अस्वीकार हुन्छु?
यदि म नागरिकता परीक्षा उत्तीर्ण छैन भने नि?
यो निर्भर गर्दछ कि तपाईंलाई कुन कारणले अस्वीकार गरियो। यदि तपाइँ एक अपराध गर्नुहुन्छ, एक गलत कथन गर्नुहोस्, तपाइँ तपाइँको ग्रीन कार्ड हरण गर्न को लागी वा अमेरिका बाट निकालिन सक्छ।
जहाँसम्म, यदि त्यहाँ अन्तर्वार्ताहरू वा परीक्षा पास गर्न असफलता, जानकारीको अभाव वा दुर्घटनाहरू जस्ता कारणहरू छन् भने तपाईंलाई अलिक बढी समय दिइनेछ। त्यस अवधिको म्याद सकिसकेपछि तपाईंलाई पुन: आवेदन दिन अनुमति दिइनेछ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाप्रति वफादार रहनको समारोह कस्तो छ?
नागरिकता जन्मेका सबै देशका नामहरू पढेपछि प्रधानमन्त्रीले आफ्ना नयाँ नागरिकहरूलाई दिएको भाषण भिडियो पर्दामा देखा पर्नेछ।
यो ग्रीन कार्ड पछाडिको स्ट्यान्डमा हस्तान्तरण गर्ने समय हो र तपाइँको अमेरिकी नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने समय हो। शुभकामना 🙂
अमेरिकी नागरिकता कति छ?
अमेरिकामा कम्पनी खोलेर नागरिकता बन्ने
तपाईं एक million 1 मिलियन कम्पनी स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ वा कम्तिमा ,5 500 को साथ EB-XNUMX लगानी कार्यक्रम अन्तर्गत पहिले अनुमोदित परियोजनाहरूको लागि आवेदन दिन सक्नुहुन्छ।
यो प्रक्रिया समाप्त भएपछि, तपाईंसँग २ बर्ष ससर्त निवास छ, र त्यसपछि तपाईंसँग शर्त निवासको अधिकार छ। Years बर्ष पछि, तपाईंसँग अमेरिकी नागरिकताको अधिकार छ।
यस प्रक्रियामा, कम्तिमा तपाईंको कम्पनीमा १० मानिसहरूलाई रोजगारले तपाईंलाई प्राकृतिकरणतर्फ ठूलो चरण दिन्छ।
यदि तपाई4को परिवारको साथ नागरिकता प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ भने तपाईले कम्तिमा 580० हजार डलर दान गर्नु पर्छ।
अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गर्न कति वर्ष?
भनिन्छ कि ग्रीन कार्ड दायाँ औसत १. years वर्षमा जारी गरिन्छ, तर केहि मानिसहरु months महिना भित्र जारी गर्न सकिन्छ।
हामीले पछि भनें अनुसार तपाईले years बर्ष बस्नु पर्छ र कम्तिमा 5० महिनासम्म अमेरिकामा शारीरिक रुपमा रहनु पर्छ। यदि तपाईं विवाहित हुनुहुन्छ भने, तपाईं कम्तिमा sp बर्षको लागि आफ्नो जीवनसाथी संग हुनु पर्छ।
हामीले पछि उल्लेख गरेका चरणहरू पार गरिसकेपछि तपाईं एक अमेरिकी नागरिक बन्नुहुनेछ (अनुसरण गर्नुपर्ने नियमहरू, परीक्षा, अन्तर्वार्ता, शपथ समारोह)।
शहर को छनौट र अमेरिका मा भाँडा
शहर छनौट गर्दा, हामी तपाईंलाई सबैभन्दा महँगो र सस्तो शहरहरूको जानकारी साझा गर्नेछौं, ताकि तपाईं आफ्नो अनुसार मह the्गो, मध्यम, सस्तो शहर रोज्न सक्नुहुनेछ।
तपाईको आफ्नै पेशा अनुसार तपाई पछिल्लो हप्ता / महिनामा अरु धेरै जागिर पोष्टि were हेर्नुभयो भने तपाई कुन शहरमा अरु धेरै अवसरहरु पाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईले फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
एक साइट जहाँ तपाईं भाँडा घरहरूको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ; यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
अमेरिकामा अपराध दर नक्शा
यस साइटले तपाईंलाई अमेरिकामा बस्नको लागि आफ्नो ठाँउ छान्न मद्दत गर्न सक्छ। क्लिक गर्नुहोस्.
राहेल थर्बर | 🇺🇦
29/05/2021 at 04:04 - जवाफ दिनुहोस्
यो वास्तव मा जानकारी को एक महान र उपयोगी टुक्रा हो।
मँ खुशी छु कि तपाइँ हामी संग यो उपयोगी जानकारी साझा गर्नुभयो।
कृपया हामीलाई यो जस्तै अपडेट राख्नुहोस्। बाडेको मा धन्यवाद।
29/05/2021 at 16:43 - जवाफ दिनुहोस्
तपाईको फिर्ताको लागि धेरै धेरै धन्यबाद। हामी हाम्रो लेखको अपडेट महिनामा एक पटक जाँच गर्दछौं। हामीले भर्खरै यो शुरू गर्यौं। आशा छ हामी तपाईंलाई राम्रो अनुभव ल्याउन जारी राख्न सक्छौं!